Tani waa usbuuca muhiimka ah, ma waxaa jiri doona muhiima bisha Oktoobar? | Waxaan ka socdaa mac
Apple waa inay u dhaqaaqdaa toddobaadkan haa ama haa haddii aad qorsheyneyso inaad sameyso dhacdo cusub bishaan Oktoobar, waa inaad u dirtaa casuumaadaha warbaahinta ugu yaraan toddobaad kahor. Toddobaadkan wuxuu bilaabmayaa maanta oo Isniin ah 15, sidaa darteed waxaan aaminsanahay in ugu dambeyn Arbacada 18 Apple waxay soo diri doontaa casumaadaha oo aan wada sugeyno inaan aragno.
Apple marwalba ma qaban dhacdo Oktoobar, laakiin falanqaynta sanadihii hore waxaan aragnaa in muddooyinkii ugu dambeeyay ay lahayd diridda bisha Oktoobar labadii sanaba mar. Waa hagaag markaa, Sanadkii la soo dhaafay sidaas ma dhicin sanadkaan, haddii kuwa ka socda Cupertino ay sii wadaan qaabkooda, waxaan heli doonnaa soo bandhigis bishan.
Mana aha wax caqli gal ah in laga fikiro in haddii ay sameynayaan dhacdo wax ka yar usbuuc iyo badh oo ay jiraan badeecooyin badan oo dhuumaha ku jira oo ay tahay in hadda la arko. Waxa ugu horreeya ee aan hubno in ay gaari doonaan dadka isticmaala waxay noqon doonaan nooca labaad ee AirPods, oo ah nooc hagaagsan oo horeyba ugu jiray ugu dambeeyay Apple Wuxuu si aad ah ugu muuqday fiidiyowga uu Muhiimku ku bilaabmay.
Diyaaradahan cusub ee 'AirPods' waxay noqon doonaan kuwa aad wax ku ool u ah, waxay si fiican ula wadaagi lahaayeen Siri kiis kiiska lacag la'aanta ahna sidoo kale waa la iibin doonaa. Tan waxaan dooneynaa inaan ku caddeyno inaan aaminsanahay in Apple uu si gooni ah u iibin karo kiiska lacag-bixinta wireless-ka ah. Haddii AirPod-yada cusubi yimaadaan, saldhigga AirPower sidoo kale waa inuu yimaadaa, in inkasta oo ay dhibaatooyin la kulmeen kulayl dartiis, haddana hubaal in Apple mar horeba raadisay xalka.
Si kastaba ha noqotee, waxa adeegsadayaashu runtii sugayaan waa haddii ay soo bandhigayaan MacBook cusub ama iPad Pro cusub oo leh jiilka labaad ee Apple Pencil. Taasi waa waxa adeegsadayaasha aniga oo kale ah ay sugayaan waxaana la soo gaadhay waqtigii cusboonaysiinta MacBook 12-inji jiilkii ugu horreeyay oo loogu talagalay qalab aad u awood badan oo ii oggolaanaya inaan waxka beddelo fiidiyowga hab xirfad badan.
Ma u malaynaysaa inay Apple samayn doonto dhacdo cusub?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Tani waa usbuuca muhiimka ah, ma waxaa jiri doona muhiima bisha Oktoobar?
Toddobaadyadu way dhaafaan oo saamiga Apple Watch Series 4 caadi ma aha
Fiidiyowga cusub ee Apple Watch 4 Video ah oo ku saabsan Shaqooyinka iyo Xaaladaha Degdegga ah